Oyster Peptide ntụ ntụ - Nrụpụta Ahịa Ahịa
Oyster peptide nwere ụba protein, vitamin, agafeghị oke nke microelement na tobaim. E wezụga nke ahụ, ọ nwere ọtụtụ …….
Oyster peptide vidiyo
Oyster peptide Smmezi
Product Name Oyster peptide
Chemical Aha N / A
Klaasị ọgwụ ọjọọ N / A
molekụla Wasatọ N / A
Agba Off-white to Yellow ntụ ntụ
Sume 100% mmiri soluble
Sịkwa akwa Tigwe N / A
Antinye Onunu, Mmeko ahu ike ndi nwoke, Mmeko nwoke na nwanyi inwe mmezi, nri nri, nri nri, dgz.
Oyster peptide Isi Okwu
Oyster peptide nwere protein dị ukwuu, vitamin, na obere microelement na turbine. E wezuga ya, o nwere otutu ihe oriri nke ndi oke osimiri nwere. Turbine ahụ nwere ike belata abụba ọbara, gbochie nchịkọta nke platelet, melite hyperlycaemia, welie ọgụ mmadụ ma mee ka metabolism dịkwuo elu. Site na nke a, a na-etinyere turbine ahụ na ngwaahịa ọgwụ. Yabụ, oporo peptide na-egosi nnukwu mmetụta na igbochi arteriosclerosis, ọrịa obi, ọrịa obi, angina, hyperlipemia, arrhythmia, diabetes mellitus, ọrịa ịba ọcha n'anya, mgbochi hypo.
Ọzọkwa, oporo peptide na-enwe mmetụta n'ahụ aphrodisiac nke ụmụ nwoke. Ọ nwere ike ịgwọ ọrịa Spermacrasia site na enweghị spam. Na mgbakwunye, mịpụta oporo dị mma maka ọrịa menopause syndrome, ọbara ọgbụgba na-eto eto na -akpata nkwonkwo ụkwụ na nkwarụ ante ma ọ bụ adịghị ike.
Gịnị bụ Oyster peptide?
Oysters abụghị naanị protein, vitamin A, B1, B2, B5, C, E, nke ihe ndị kwesịrị ekwesị na-egosi (dịka calcium, iron, zinc, selenium, manganese, copper, wdg) na taurine, ma nweekwa ndụ mmiri pụrụ iche ụdị nri dị iche iche.
A na-eme Oyster Peptide site na anụ oyster site na teknụzụ bioenzymatic hydrolysis nke oge a, na mgbe ahụ site na nkewa, nhicha, deodoriation na ihicha ịgba na ihe ndị ọzọ. Ngwaahịa ahụ bụ odo edo edo na ụdị ntụ, nke na-ejigide ihe omimi bio bio nke ọma. Ọ na-atọ ezigbo ụtọ ma nwee ike ịnabata ya ngwa ngwa mana enweghị mmetụta ọ bụla.
Oyster wepụ na-enye kpam kpam eke iyi nke glycogen, phospholipids, mmiri vitamin na mineral na a ọgaranya isi iyi nke amino acid taurine. A na-ewere nsị oporo dị ka ihe bara uru maka ahụ na imeju imeju, site na ịkwalite secretion nke bile na imezi ọrụ ya. Ejikwala oyster wepụ kemgbe ọtụtụ narị afọ dị ka aphrodisiac iji mee ka ikike ịmụ ụmụ dịkwuo elu. Ejikwala oyster wepụ kemgbe ọtụtụ narị afọ dị ka aphrodisiac iji mee ka ikike ịmụ ụmụ dịkwuo elu.
Oyster peptide ntụ ntụ uru
Iji kwalite ọrụ nwoke na nwanyị
Oyster Peptide ntụ ntụ nwere ike ime ka nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ. Mgbe ị na-achịkwa ahụ ọrụ ọrụ ahụ ma na-emeziwanye ahụ abụọ nke oriri na-edozi ahụ.
Peystide oporo nwere otutu arginine na-adighi mkpa banyere ya, yana ihe ndi ozo banyere zinc. Oyster peptides nwere ike melite ọrụ nwoke na nwanyị. Mmebi nke mmekọahụ, enweghi ike, prostate na-ebuwanye ibu, hypoplasia nke ọrịa na ụmụ nwoke ndị ọzọ, n'ọtụtụ ọnọdụ maka isi ndu Eshia ezughi oke.
Mwepu nke oporo nwere ezi ihe nchebe na mmerụ ahụ na-eme nyocha, nwere ike belata ọnụọgụ mkpụrụ ndụ ALT / AST nke mmerụ ahụ akwara CC14 ma belata ogo nke stem cell mmerụ ahụ.
Welie ọgụ ọgụ.
Oyster peptide dị na polysaccharides oporo nwere ike ịkwalite ọgụ, gbochie ọrụ ịgbatị nje virus.
Ngwakọta hypoglycemic nke oporo wepụ na sulfonylurea na ọgwụ antidiedi biguanide.
Ọrịa obi na ọrịa ụbụrụ.
Oyster glycosaminogly nwere ike ichebe megide mmebi nke oxyidative nke mkpụrụ ndụ endothelial vas na-emetụta site na hydrogen peroxide, ma nwee ike igbochi omume nke ọrịa obi dịka ọbara mgbali elu, arteriosclerosis, ọrịa strok na ihe ndị yiri ya n'ihi mmerụ ahụ endothelial.
Mmetụta mgbochi mgbochi.
Oyster eke nọ n'ọrụ peptide (BPO) nwere ike igbochi mmụba nke mkpụrụ ndụ cancer BCC-823, mkpụrụ ndụ kansa dị oke mkpa na-akpata apoptosis.
Oyster peptide ntụ ntụ ojiji na ngwa
Etinyere ya na mpaghara ngwaahịa ngwaahịa ahụike, n'ihi ọtụtụ mmetụta ọgwụ ya, a ga-eji ya aslo ọgwụ ọgwụ
Etinyere ya na mpaghara ịchọ mma, ahihia ka akụrụngwa nke ngwaahịa nlekọta anụ pụtara n'ahịa.
Ouster peptide ntụ ntụ etinyela na ihe ọverageụ beụ, Mmezi ahụ ike ụmụ nwoke, Mmekọahụ Mmekọahụ nwoke na nwanyị, nri ahụike, nri nri, wdg.
Oyster peptide ntụ ntụ nyocha ndị ọzọ
Taurine maka mkpịsị oporo atherosclerosis na-emepụta site na mkpọchi, yana nsona nke angina pectoris na-akpata, infarction myocardial, infarction nke akụkụ ụbụrụ nwere ezigbo mgbochi mgbochi.
N'ime peystide oporo nwere amino acid nke nwere ike imezi ọrụ nke imeju, gbochie mkpokọta lactic acid, iji nyere aka mee ka mgbake dịkwuo elu na ịkwalite ike ọgwụgwụ anụ ahụ. Na mgbakwunye, peptide taurine na oporo glycogen nwere ike ọ bụghị naanị inye aka weghachi ike ọgwụgwụ anụ ahụ, mana ike ọgwụgwụ nke uche iji gbakee dị ezigbo mma, achọpụtara nkwalite nkụda mmụọ endogenous na mweghachi nke ọhụụ.
Oyster nwere ike igbochi akpọnwụ akpọnwụ ma kwalite metabolism nke anụ ahụ, mbibi melanin nke anụ ahụ, na-emepụta ọmarịcha anụ ahụ. N'ihi na ọ nwere ike ịkwalite nguzobe na izozo nke homonụ, mmezi nke anụ ahụ, enweghị mgbapụta afọ ime, nkwarụ nke menopausal, nwekwara mmetụta dị mma. Na mgbakwunye, ayodiin na tryptophan na oporo nwere ike inyere gị aka itolite ntutu ojii mara mma.
 Ihe mgbochi oporo. Wang L et al. Dev Comp Immunol. (2018)
 [Immunomodulatory mmetụta nke oporo peptide na ụmụ oke immunosuppressed]. Xu D et al. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. (2016)
 Nchọpụta na ihe mgbochi na - egbochi ọgwụ α-thrombin nke peptide anticoagulant pevelide sitere na protein otis (Crassostrea gigas). Cheng S et al. Ọrụ nri. (2018)
 oporo alclase-hydrolyzed (Crassostrea rivularis) anụ na-eme ka antioxidant na ọrụ aphrodisiac dị na ụmụ oke nwoke. Zhang Z, Su G, Zhou F, Lin L, Liu X, Zhao M. Food Res Int. 2019 Jun; 120: 178-187. doi: 10.1016 / j.foodres.2019.02.033. Epub 2019 Feb 20.
Ginseng Oligopeptides ntụ ntụ
Osimiri kukumba Peptide ntụ ntụ